Qurbo Joogta Soomaaliyeed oo Godkooda Biyo ugu soo galay lagana yaabo in ay ku fashilmaan Siyaasada Cusub ee Dalka | Somali - Diaspora
Qurbo Joogta Soomaaliyeed oo Godkooda Biyo ugu soo galay lagana yaabo in ay ku fashilmaan Siyaasada Cusub ee Dalka
September 27, 2012 – Waxaa Markaan aad u yar saameynta ay Qurbo joogta Soomaaliyeed ku yeelanayaan Siyaasada Cusub Dalka Soomaaliya kadib markii ay soo bateen Qurba joog damac siyaasadeed waalay oo mudooyinkii Dambe usoo shaqo tagay Soomaaliya .
Dowlada Cusub ee hada uu Hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo Waramayaa in aysan xiligan mudnaan badan iyo boosba u heyn Qurba joogta Soomaaliyeed ee Wadanka usoo shaqa taga iyadoo Dowladan cusub taa badalkeeda xooga saareyso Aqoonyahanada Siyaasiyiinta kusugan gudaha Soomaaliya in door muuqdo ku yeeshaan Dowlada Cusub.
Qurbo joogta ayaa lagu eedeeyaa in aysan xog badan ka heyn Dalka Soomaaliya iyo waajibaadka shaqo ee xiligan uu dalku u baahan yahay iyo sama tabixinta dal bur buray 20-sano dadkiisiina gaajo iyo dagalao dhameeyeen ,balse damacooda siyaasadeed Qurbo joogta tan ugu weyna uu yahay in uu Magac ka helo Xilalka loo dhiibo iyo lacago ka badan tii ceer ahaanata Wadama ay joogeen ugu qaadan jireen.
Hasa ahatee Raga Siyaasada kujira ama Aqoonayahnada Wadanka ku sugan ayaa la tilmaamaa in ay garan karaan Xalka Dalka iyo dadkuba u baahanyihiin maadama ay si dhab ah uga warqabaan xaalka dalka iyo sida ay wax u socdaan iyo tilaabooyinka muhiimka ah in la qaado sidii looga dhabeeyo Hanaanka Dowladnimo.
Xukuumadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa Hogaanka u hayay rdad qurbo joog ah oo wadanka ka maqnaa 20-sano ka abadn kuwaa oo keenay in Siyaasada dalka dhan gacanta u gasho Qurbo joogtaasi ka kala yimid Wadmaad Yurub iyo Amerika ,hasa ahatee si ugu fashilmay in wax badan ee soo kordhiyaan.
Dad badan ayaana Rumeesan hadii Xukunka Dalka loo dhiibo Dad xog ogaal ah oo daacad u ah Samatabixinta Dalka iyo dadkan dhibtooday in ugu yaraan Guul gaari doonaan laguna nasan doono halka hadii Xukunka loo dhiibo dad doonaya in ay CV-ga ku buuxsadaan Wax qabadku aad u yaraan doono.
Waxaana la dhoorayaa Raizul Wasaaraha lagu dhawaaqo iyo Xukuumada uu soo dhisi doono dadka kamid noqon doono taa oo Howlaha Dalka Hogaanka koowaad u ah loogana fadhiyo Wax qabad run ah.
Fadeexad ka dhalatay lacago la lunsaday Sameenta Qurbo jooga Soomaaliyeed
Comment by somaliamomentum on September 27, 2012 1:31 pm
Wararkii Ugu Dambeeyay Xiliga laga Yaabo in lagu Dhawaaqo R/Wasaaraha iyo Raga ugu cad cad ee isku soo haray
Wararkii ugu danbeyey ee kasoo baxaya aqalka madaxtooyada ee la xiriirey magacaabista Raizul wasaaraha cusub ee Soomaliya ayaa ku waramaya in madaxaweynaha Soomaliya Xasan Sh. maxamuud Calasoow laga yaabo inuu soo magacaabo shaqsiga qabanaya jagadan maalinta sabtida ah ee soo socta inkastyoo laga yaabo in sababa jira owgeedna kasoo hor mariyo.
Ragga loogu hadal haynta badanyahay xiligan xafiiska madaxtooyada ayaa waxaa ka mid ah Saaciid Garaad, oo ah NGOst ganacsade ah, isla markaasna ah ninka qaba Xildhibaan Casha Xaaji Cilmi.
Saaciid oo ay reer ahaan aad isugu dhawyihiin Maxamed C/laahi Farmaajo, ayaa dadka yaqaan ku tilmaamayaan inuusan ahayn shaqsi howl kar ah.
Ninka kale ee aad loo hadal hayo aqalka Madaxtooyada waa ninka lagu magacaabo C/Wali Sheekh Axmed oo kasoo jeeda isla beesha Mareexaan, gaar ahaan reer Ugaas, waxaana dhalay sheekh caan ka ahaan jirey gobolka Gedo.
C/wali wuxuu muddo ka shaqeyeynay bankiga Islaamka xaruntiisa Jidda, lamana oga inta ay le’egtahay kartidiisa iyo inta uu dad aqoon u yahay bulshada Soomalida.
Warku wuxuu intaa ku daraya in uu si rasmi ah ooga baxay tartatanka loogu baratamayo xilka R/wasaaranimada, Maxamed Axmed Sh. Cali Buraale ( Doodishe), oo ka mid ah kooxda Damm Jadiid ee hadda saameynta badan ku leh xafiiska madaxweynaha, sidoo kale lama oga inta ay le’egyihiin fursadaha uu heli karo, Maxamed Barre oo uu xoog u kolkoolinayey hogaamiyaha ruuxiga ahee kooxda Damm jadiid faarax Sh. C\_qaadir.
Maxamed Barre ayaa aad isu yaqanaan Faaarax oo ay jamacadda iskala soo barteen Pakistan, laakiin waxaa lagu tilmaamay shaqsi aad u khibrad yar.
Maxamed C/laahi farmaajo, ayaa isna ku jira Liiska raga ugu cad cad ee laga yaabo in loo Magacaabo Raizul Wasaare inkastoo ay jiraan culeesyo dhinacyo badan ah oo horseedi kara in Farmaajo aan mar kale loo soo Magacaabin Raizul Wasaare.
Waxaana laga yaabaa in wax walbo isbadalaan Saacadaha soo socda iyo maalmaha nagu dhaw marka uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaato go’aanka ugu dambeeya uu ku Magacaabayo Raizul Wasaaraha Soomaaliya ,waxaana la saadaalinayaa Ragaan aan soo xusnay midkood in laga yaabo in uu kusoo baxo.
Somalia Diaspora Discussion at Chatham House Maxaad ka taqanaa Shaqsiyaadka ugu awooda badan xiligan ee ku hareereysan Madaxweynaha Somaliya